Ciyaaryahan Caaqilka Oo Farriin U Diray Xulka GobolkaSaaxil iyo Taageereyaasha
HomeWararka MaantaCiyaaryahan Caaqilka Oo Farriin U Diray Xulka GobolkaSaaxil iyo Taageereyaasha
Xiddiga xulka gobolka Saaxil ee Maxamed Cali Jaamac (Caaqilka) ayaa farriin dhiirigelin ah u diray ciyaartoyga xulka gobolkaas iyo taageereyaashaba, kuwaas oo uu u sheegay in ay niyadda geliyaan in gobolkoodu u gudbi doono wareegga afar dhamaadka ee ciyaaraha gobollada.
Caaqilka oo la soo xidhiidhay shabakadda ciyaaraha ee CADALOOL, waxa uu tilmaamay in kulankooda u dambeeya ay rajaynayaan in ay guul wanaagsan ka gaadhaan, isla markaana ay u gudbaan wareegga xiga ee afar dhamaadka.
Maxamed Jaamac Cali (Caaqilka)
Xulka gobolka Saaxil oo kulankii furitaanka guul 4-0 ah ka gaadhay Xaysimo ayaa la qabtay kulankii xigay ee Awdal, kulankiisa saddexaadna waxa uu la ciyaarayaa Sanaag oo aan wax dhibco ah lahayn, hase yeeshee, ciyaaryahan Caaqilka waxa uu aaminsan yahay in xulka Saaxil uu leeyahay awood ciyaareed, karti iyo firfircooni uu kaga dul-tallaabsan karo.
“Xulka gobolka Saaxil wuxuu leeyahay awood, karti iyo dhiirranaan uu ugu gudbi karo wareegga semi-finalka, taageereyaashana waxaan u sheegayaa in ay ku kalsoonaadaan ciyaartoygooda.” sidaas ayuu yidhi Maxamed Cali Jaamac Caaqil.
Laacibkan hibada u leh kubadda cagtu oo dhaawac kaga maqnaa ciyaartii hore xulka gobolkiisa, laakiin filaya in uu safto kulanka maanta, ayaa waxa uu xusay in xiddigaha gobolkiisu ay yihiin kuwo isla qabsaday oo awood u leh in ay gaadhaan faynalka tartanka.
Waxa kale oo uu tilmaamay in kubadda ay tahay bar cad iyo bar madow, taas daraadeedna marka laga yimaaddo kartidooda aanay diiddanayn waxa nasiibkoodu siiyo.
Real Madrid v Atletico Madrid, Monaco v Juventus – Isku Aadka Semi-finalka Champions League Oo La Sameeyey
21/04/2017 Abdiwahab Ahmed
Real Madrid Iyo Monaco Oo Ka Heshiiyey Iibka Mbappe Oo Ku Kacaya 180 Milyan Euro
Saxaafadda UK Oo Heshay Warqad 40 Sannadood Ay Liverpool Qarinaysay Iyo Nuxurkeeda
27/07/2015 Abdiwahab Ahmed